Ikhabhinethi yeLakefront eKampeska w/ Dock, Isimbo, kunye nokuJonga
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguTina
"I-Lot 1028": Yakhiwe ngo-1979, ikhabhathi yethu enomgangatho omnye ihlala kwiflethi, i-100' indawo enkulu enendawo eninzi yokudlala kwaye yonwabele iimbono ezimangalisayo zeLake Kampeska. Ikhitshi eligcweleyo, igumbi lokuhlala kunye negumbi lelanga elinenqanawa kunye ne-vinyl yomgangatho weplanga weplanga kulo lonke.
Eli ligumbi le-850 square foot, ikhabhathi yesitayile sasefama ilindele ukufika kwakho! Isicwangciso somgangatho ovulekileyo silungile kubantwana kwaye sisonwabisa ngelixa usonwabela iimbono zeLake Kampeska. Yiza imvula okanye kukhanye! Igaraji ibonelela ngocango lwegaraji esecaleni kwechibi apho unokonwabela naluphi na usuku lwemvula okanye ukonwabele ipatio yangaphandle yekhonkrithi yokuzola kusasa ukuya kwiindibano zangokuhlwa zangokuhlwa kunye nosapho kunye nabahlobo!
Sihlala eWatertown ke siyayixabisa nakuphi na unxibelelwano ngexesha lokuhlala kwakho kwaye sinako ukubakho ukunceda ngendawo yokuhlala.